ताजमहल सम्बन्धी १८ आश्चर्यजनक तथ्य
जीवनशैली : संस्कार
कात्तिक २३, २०७७
काठमाडौं — ताजमहल संसारका सात आश्चर्यमध्ये एक हो । यो प्रेमको अद्भुत निशानी हो । सुन्दरता र प्रेमको कथा बोल्ने ताजमहलका बारेमा धेरै तथ्य अझै बाहिर आएका छैनन् ।
आउनुस् जानौं यसको रहस्य :
१ मुमताजको मकबराको छतमा प्वाल
शाहजहाँले आफ्नी प्यारी पत्नी मुमताजका लागि बनाएको ताजमहलमा उनको मकबराको छतमा एउटा प्वाल छ । फेरि अर्को ताजमहल नबनोस् भनेर शाहजहाँले ताजमहल बनाउने सबै मजदुरहरूको हात काटिदिने घोषणा गरेपछि मजदुरहरूले ताजमहलमा एउटा कमी बाँकी रहोस् भनेर प्वाल छोडेका थिए । शाहजहाँले देखेको सुन्दर भवनको सपना चकनाचूर पार्न मजदुरहरूले कोशिश गरेका हुन् ।
२ बाँसको घेरा
दोस्रो विश्वयुद्ध, सन् १९७१ को भारत–पाकिस्तान युद्ध र अमेरिकामा सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि सुरक्षाकर्मीहरूले ताजमहललाई चारैतर्फ बाँसको सुरक्षाघेरा बनाएर माथिबाट हरियो रंगको चादरले ढाकेका थिए । यसो गर्दा ताजमहल दुश्मनहरूको नजरमा नपरोस् र यसमा क्षति नपुगोस् भन्ने तिनीहरूको लक्ष्य थियोे ।
३ पहिलोचोटि हेर्दा
शाहजहाँले पहिलोचोटि ताजमहल हेरेपछि भनेछन्, ‘ताजमहलले प्रेमको कथा मात्र भन्दैन । यहाँको पवित्र जमीनमा पाउ राख्ने सबैलाई यसले दोषमुक्त गरिदिन्छ र चन्द्रमा तथा तारा यसको साक्षी बस्छन् ।’
४ हात नकाटिएको
ताजमहल बनेपछि शाहजहाँले मजदुरहरूको हात काटिदिएका थिए भन्ने हल्ला चलेको थियो । तर इतिहासको अध्ययन गर्दा ताजमहलपछि बनेका अरू भवनहरूमा पनि ती मजदुरहरूले योगदान गरेका थिए । उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल निर्माण दलका नेता थिए र उनले नै लालकिलाको पनि निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेका थिए ।
५ ताजमहलका मीनार
तजमहलका मीनारहरूमाथि ध्यान दिनुभयो भने चारै मीनार एकअर्कातर्फ झुकेको देखिन्छन् । चट्याङ पर्दा र भूकम्पका बेलामा मुख्य गजुर नखसोस् भनेर यस्तो एंगल बनाइएको हो ।
६ ताजमहल बेचिँदा
बिहारका कुख्यात ठग नटवरलालले एकचोटि ताजमहललाई मन्दिर भन्दै केही सोझा मानिसलाई बेचिदिएछ । नटवरलालको यो हिम्मत देखेर उसका गाउँका मानिसले उसको नाममा मन्दिर बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
७ यमुना नभए ताजमहल हुन्थेन
ताजमहलको आधार एउटा यस्तो काठ हो जसलाई मजबुत राख्नका लागि चिसो भइराख्नुपर्छ । ताजमहल नजिक बग्ने यमुनाले आधारलाई चिसो राखिरहन्छिन् ।
८ बहुमूल्य पत्थर
ताजमहलका कलाकृतिमा २८ किसिमका बहुमूल्य पत्थर लगाइएका थिए । ती पत्थर चीन, तिब्बत र श्रीलंकाबाट ल्याइएका थिए । बेलायती साम्राज्यका बेला अंग्रेजहरूले यी पत्थर चोरेर बेलायत लगे । यस्ता पत्थर आँखै चम्काउने खालका थिए रे ।
९ कुतुबमीनारभन्दा अग्लो
कुतुबमीनारलाई भारतको सबभन्दा अग्लो भवन भानिन्छ तर यसको उँचाइ ताजमहलभन्दा सानो छ । सरकारी आँकडा अनुसार ताजमहल कुतुबमीनारभन्दा पाँच फूट अग्लो छ ।
१० ताजमहलमा खर्च
शाहजहाँले ताजमहल बनाउँदा उनको समयमा लगभग तीन करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । अहिले बनाउनुप–यो भने यसमा एक खरब १५ अरब रुपैयाँ खर्च पर्छ ।
११ सबै पानीका फोहरा एकैचोटि
ताजमहलमा राखिएका कुनै पनि फोहरा पाइपमा जोडिएका छैनन् । हरेक फोहराको तलपट्टि एउटा तामाको ट्यांक छ । त्यो एकैचोटिमा भरिन्छ र दबाब बनेपछि एकैचोटि पानी फाल्न थाल्छ ।
१२ ताजमहल गायब
सन् २००० मा प्रसिद्ध जादूगर पीसी सरकारले दर्शकहरूको आँखामा भ्रम छरेर ताजमहल गायब गरिदिएका थिए ।
१३ दिनदिनै बाह्र हजार पर्यटक
एकैदिनमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक पुग्ने ठाउँ भनी ताजमहललाई चिनिन्छ । संसारका कुनाकाप्चाबाट ताजमहल हेर्नका लागि दिनदिनै औसतमा १२ हजार मानिस पुग्छन् ।
१४ कालो ताजमहलको सपना
शाहजहाँले आफ्नी श्रीमतीका लागि सेतो ताजमहल बनाएपछि आफ्नो लागि कालो ताजमहल बनाउने सपना देखेका थिए । तर उनका छोरा औरंगजेबले उनलाई कैद गरेपछि उनको सपना अधूरै रह्यो ।
१५ ताजमहलसँग पहिलो सेल्फी
आजभोलि जसले पनि सेल्फी लिन्छ तर जर्ज ह्यारिसन नामक व्यक्तिले फिश आई लेन्स प्रविधि गरेर सेल्फीयुगभन्दा धेरैपहिले ताजमहलसँग सेल्फी लिएका थिए ।
१६ रंग परिवर्तन
ताजमहलको रंग दिनको प्रत्येक प्रहरसँगै बदलिन्छ । बिहान हेर्दा गुलाफी देखिने ताजमहल साँझमा दूधजस्तो सेतो र पूर्णिमाको रातमा सुनौलो देखिन्छ ।
१७ अमेरिकामा ताजमहल
विदेशी गायक हेनरी सेन्ट क्लेयरले ताजमहलप्रतिको प्रेम दर्शाउनका लागि आफ्नो स्टेज नेम नै ताजमहल राखेका छन् ।
१८ मुटुमा ताज
ताजमहल बनाउनेहरूले यसमा धेरै नै ध्यान पु–याएका थिए । त्यहाँ पुगेपछि तपाईंले ताजमहललाई आफ्नो मुटुमा राखिहाल्नुहुन्छ । एक हदसम्म तपाईं ताजमहलबाट जति पर पुग्नुहुन्छ, त्यो अझै ठूलो र भव्य देखिन्छ अनि तपाईंका यादबाट कहिल्यै हट्दैन ।
किन कुरुक्षेत्रमा नै लडिएको थियो महाभारतको युद्ध ?
मन्दिरमा किन बजाइन्छ घन्टी ? यस्ता छन् वैज्ञानिक कारण
धर्मशास्त्रका कुरा : माउसुली देख्नुभयो भने यसो गर्नु...
उच्च रक्तचाप : कुन अवस्थामा बढी खतरा ?
एमालेमै रहेर माधव नेपाल पक्ष मन्त्री बन्न मिल्छ? यस्तो छ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको जवाफ
साउन १७, २०७८
नेपालमा व्यापार घाटाको कहालीलाग्दो तथ्यांक : यसरी बढाउन सकिन्छ निर्यात
कोभिड-१९ : थपिए २५६८ संक्रमित, १८ जनाको मृत्यु
बहुप्रतीक्षित होण्डा सीबी ३५० आरएस नेपाली बजारमा, कति छ मूल्य ?
ईपीएस परीक्षा पास गरेकालाई कोरिया पठाउन निर्देशन
नेपाल सहकारी बैंक खोल्न प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक
‘ब्याचलर’ पढ्ने मोटरसाइकल चोरको बयान- कलेज खर्च जुटाउन चोरी !
चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६६औं वर्षगाँठलाई सम्झिइन् चिनियाँ राजदूतले
म्यान्मारका सेनाप्रमुख भन्छन्– २ वर्षपछि आमचुनाव गराउँछु
प्रभुराम शर्मा तोकिए कामु प्रधानसेनापति
जलविद्युतमा लगानीकर्ताको आकर्षण, सामान्य अंकले नेप्से बढ्दा कारोबार भने १२ अर्बमा सिमित